"I-Le Vallat", enepuli enamanzi ashushu. - I-Airbnb
"I-Le Vallat", enepuli enamanzi ashushu.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguValérie
Ukuthi cwaka kwi-cal-de-sac, kumhlaba owenziwe ngamaplanga novalekileyo, indawo yokuhlala phantsi esuka kwindlu.
Ukudityaniswa kobuhle nobutofotofo bale mihla kwenza ibe yindawo efanelekileyo yokuhlala.
Ipuli enamanzi ashushu onokwabelana ngayo nabanikazi , inkundla ye-pétanque, ukufikelela ngqo kuyo.
Ungangena kwindawo yokuhlala ngeplanga labucala, i-pergola kunye netafile yokutyela kunye nendawo enomthunzi ehlotyeni, iindawo zokuphola elangeni echibini .
Ikude ngeemitha ezimbalwa (ukufikelela ngqo) uza kuba nepuli enamanzi ashushu ayi-8 x 4 m (phakathi kuka-Aprili ukuya ekupheleni kukaSeptemba) kunye nendawo yayo yokuphumla, izitulo eziphezulu, ishawa yelanga.
Iindawo ezikufutshane ezizolileyo nezihlala abantu.
Indawo yokuhlala yakhiwe kwigumbi lokuhlala elinekhitshi elinento yonke, ibhedi enye, ifriji/i-deep freezer, izinto zokuxhoma iglasi, ioveni encinci, iketile, umatshini wokwenza ikofu, i-toaster, irobhothi, into yokuxuba . Igumbi lokuhlala elinezitulo, itafile yokutyela, iTV enkulu, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu.
Indawo yokuhlala ayinazo iintsana .
Ngasemva kwendawo yokuhlala , kwindawo encinci enekhethini emnyama, ungena kwigumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini.
Igumbi lokuhlambela eline-shower nento engenanto (ukungena kwigumbi lokulala) , indlu yangasese eyahlukileyo. Iindawo ezininzi zokugcina ezineeshelfu neehengari.
Indlu eyenziwe ngamaplanga yakhiwe ngezinto zokukhusela indalo eziyenza ibe tofotofo kakhulu ehlotyeni /ebusika.
Ekupheleni kwe-cal-de-sac, ethe cwaka kodwa engahlukananga, zonke izinto ezinokusetyenziswa ezikufutshane. (ivenkile yokubhaka, ikhefi, icuba /iofisi yecuba, ikumgama weemitha eziyi-400, ivenkile enkulu ekumgama weekhilomitha eziyi-2)
Umbuki zindwendwe ngu- Valérie
Originaires du Grand Est nous avons la chance d'habiter dans le Gard depuis 2012 . Nous aimons randonner dans nos belles montagnes cévenoles et profiter de nos rivières durant l'été.
U-Alain no-Valerie baxhomekeke kuwe kuyo nayiphi na imibuzo enento yokwenza nokuqesha, ukukhenketha, iindawo zokuqubha, ukunyuka intaba, iinkonzo, ngaphambi nangalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Sihlala kwindlu engummelwane, uya kwamkelwa sithi ngokukhululekileyo nobubele kwaye sisoloko sikhona ukuze sithethe ngayo yonke into kwaye akukho nto uyifunayo.
U-Alain no-Valerie baxhomekeke kuwe kuyo nayiphi na imibuzo enento yokwenza nokuqesha, ukukhenketha, iindawo zokuqubha, ukunyuka intaba, iinkonzo, ngaphambi nangalo lonke ixesha lo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bagard